Maltepe Esenkent lugta ka gudubta xad dhaafka waa laga saaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaltepe Isku-xirka cirifka ee Esenkent ayaa laga saaray
26 / 01 / 2015 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
Maltepe Cisbitaalka weyn ee loo yaqaan 'Esenkent removed' ayaa laga saaray: Meelaha lugta ah ee ka ag maraya Saldhiga Tareenka ee D-100 ayaa laga saaray. Dadka lugaynaya waxay bilaabeen in ay isticmaalaan METRO gawaarida si ay u dhaafaan waddada.
Magaalada Istanbul ee magaalomadaxda waxay ka saartaa baaskiilada marinada wadooyinka waaweyn. Sirkeci, Pertevniyal, ITU Ayazağa iyo Topkapı Pazartekke ayaa la saaray si ay u bixiyaan meel sahlan oo dadka lugaynaya.
Maltepe Eschenkeste, oo miisaankiisu yahay qiyaasta 180, ayaa sidoo kale waxaa dhammeystiraya shaqada saacadaha shaqada ee 5. Shaqada kala-soocidda ee kala-soocidda waxay bilaabantay Janaayo 25 Sabti Sabtida badhtamaha Janaayo 2015. Heerka koowaad ee daraasaadka waxaa lagu fuliyay qaab laba nooc ah ilaa iyo subaxdii. Aroortii, waddada ayaa loo xiray gaadiidka sababo ammaan dartood.
PEDESTRIAN ISTICMAALKA METRO LAHAYN
Gaadiidka Esenkent ee hoos yimaada gobolka, suunka gawaadhida ka dib marka laga saaro wixii khalkhal ah ma dhaafaan. Pedestriiddu si fudud ayey u gudbi karaan moolka hoostiisa.
Ka qaadista gawaarida qorraxda ee Boosaasiinta
Ogeysiiska Udhanka: Sahanka dhulka iyo mashruucyada loogu talagalay dadka lugaynaya ee xad dhaafka ah yapıl
Ogeysiiska Qaadashada: Adeegga Diyaarinta Mashruuca waxaa loo qaadi doonaa dadka lugeeya
Iridaha weyn ee IZBAN ee Torbali waxay leedahay calaamad
Khadka tareenka ee Ukraine ee-dhaafka ah
RayHaber 26.01.2015 Warbixinta Shirka